> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata Text ka EPUB ebook
Kere ọtụtụ ederede eBooks na ugbu a mkpa iwu na EPUB format maka ibipụta online? Ma ọ bụ nwere ọtụtụ larịị ederede eBooks ma na-achọ ka ha dị ebube karị na atụ na EPUB format? Niile na ihe niile, EPUB ebook ugbu a bụ ndị kasị ewu ewu ebook usoro. Ọ bụ nnọọ dị mkpa iji tọghata Text ka EPUB ebook. Ka-esi ala ka ọrụ nke ewu anyị EPUB eBooks.
Iji tọghata ederede ka EPUB, i kwesịrị MePub. MePub Bụ ọkachamara EPUB ebook-ewu ihe. Na ya, ị nwere ike itinye ederede, oyiyi, hyperlinks, ndịna-emeputa, wdg Lee ndị nzọụkwụ iji tọghata ederede ka EPUB na MePub.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Mepub
Mgbe ị na ebudatara Mbido omume na abụọ-pịa iji wụnye ya. Nnọọ ịnakwere Ikikere nkwekọrịta, setịpụrụ a ụzọ wụnye ihe omume na pịa wụnye bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2. Launch ederede na EPUB Ntụgharị na hazie EPUB Ama.
Abụọ-pịa Ndenye Malite icon ẹkedori MePub na mgbe ahụ na mmapụta window igbe, jupụta na akwụkwọ Ama: aha, na-ede akwụkwọ, ụbọchị, asụsụ, isiokwu, nchọpụta, nkwusa na nkọwa. Na okirikiri nhọrọ ukwuu ebe, hazie okirikiri nhọrọ ukwuu, ndị dị otú ahụ dị ka ihe odide agba, n'akụkụ peeji na spacing. Họpụtara a ụzọ ịzọpụta lekwasịrị EPUB eBooks na mmepụta ntọala ngalaba.
Nzọụkwụ 3. Set EPUB ebook cover
Ahọpụta a mara mma ma ọ bụ nkecha akwụkwọ cover dị ezigbo mkpa na-eme ka a tọrọ ụtọ EPUB ebook. Unu ga-akwadebe a foto maka EPUB akwụkwọ tupu oge eruo. Ugboro abụọ pịa hapụrụ cover ebe bulite ihe oyiyi si obodo ike mbanye ka EPUB ebook cover.
Nzọụkwụ 4. tọghata Text ka EPUB
Pịa na Add ọdịnaya bọtịnụ ngwa ngwa mbubata Obodo ederede ebook ị dị njikere usoro ihe omume. Ma ọ bụ i nwere ike na-ịdọrọ na dobe eBooks faịlụ ka ederede ka EPUB Ntụgharị.
N'Usoro isi iji: pịa iji họrọ ọ bụla isi na-akpali elu na ala ịgbanwe isi iwu.
Nyegharịa dị ọdịnaya: pịa na faịlụ na ụdị aha ọhụrụ
Mgbe ederede na EPUB akakabarede, ị nwere ike bulite gị onwe gị EPUB ebook ka Internet maka nkekọrịta ma ọ bụ nyefee EPUB ka iPad maka ịgụ ihe. Ọ bụ jụụ na-ewu gị onwe gị EPUB eBooks. Gbalịa iji tọghata ederede ka EPUB ugbu a?
Download Text ka EPUB Ntụgharị free ikpe mbipute ugbu a!
Top 5 Free MP4 ka WAV converters
Video ka Flash Encoder - tọghata Video ka Flash